Fivoriamben'ny birao vita pirinty vita pirinty - PCBFuture
Teny lehibe: mpanamboatra PCB, serivisy PCB Assembly, Fivorian'ny birao boribory
PCBFuture dia mpanamboatra PCB & PCBA matihanina avy any Shina. Izahay indrindra dia manolotra faran'izay avo lenta, lafiny roa sosona PCB, LED alimina PCB, PCB malefaka, fividianana singa PCB Manamboatra ary serivisy PCB Assembly. PCBFuture dia nampiditra fitaovana mandroso sy manamafy & rafitra fitantanana feo. Mandritra izany fotoana izany dia nandalo ny mari-pahaizana momba ny rafitra kalitao iraisam-pirenena toy ny ISO 9001: 2008. Manana mpamatsy entana feno sy maneran-tany izahay.
Maninona no mifidy ny fivorian'ny birao misy pirinty anay
PCBFuture dia manana rafitra fividianana singa matotra sy mahomby manompo ny bokotra famoriamben'ny PCB miaraka amin'ny vidiny mirary, manana ekipa matihanina tompon'andraikitra amin'ny fividianana sy fitantanana singa PCB an'ny mpanjifanay.
Manolotra ny Surface Mount (SMT), Thru-Hole (THT) ary ny hybrid roa izahay. Manolotra fametrahana tokana na roa sosona koa izahay.
Manana ny fahaizana mandamina akora simba miditra, fanaraha-maso ny fizahana ary fanandramana tsara izahay, ary afaka manome anao serivisy fivoriambe PCB tsara indrindra manomboka amin'ny andiany kely ka hatramin'ny famokarana betsaka. Mandritra ny fizotry ny fametrahana PCB, raha misy lesoka mifandraika amin'ny fanamboarana PCB dia hitatitra tatitra momba ny DFM ireo injenieranay.
Halefanay aminao ny vidin'ny BOM amin'ny alàlan'ny mailaka ao anatin'ny 24 ora.
Miaraka amin'ny serivisintsika fanamafisana ny tsindry BGA, azontsika atao tsara ny manala ilay BGA diso toerana, manindry azy, ary mamerina azy amin'ny PCB tsara. Mandany vola.
Tabilao fanoherana voarindra
Vokatra fitsapana Semiconductor
Taratasy herinaratra varahina mavesatra
2-6L hazo fisaka vy
2-8L flex board & board henjana-flex
Fitsapana vokatra vita
Serivisy fananganana boaty
Sourcing ny singa sy ny fivoriambe PCB feno
Manome serivisy koa izahaymifandraika amin'ny fanamboarana PCB sy ny fanamboarana ary ny fizahana elektronika. Ny fizotry ny fitaovantsika sy ny fivoriantsika dia mifanaraka amin'ny fenitra IPC, MIL-Spec, RoHS 5 ary 6.
Maherin'ny 10 taona lasa mpitarika indostrialy, PCBFuture dia iray amin'ireo mpanamboatra PCB za-draharaha indrindra ao Shina. Faly izahay manamboatra vokatra avo lenta ary manome toeram-piasana azo antoka sy mandroso ho an'ny mpiasa 200 anay.
Amin'ny maha mpiara-miasa amin'ny fitarihana pcb famokarana sy fivoriambeSerivisy (PCBA), PCBFuture dia miezaka ny hanana traikefa amin'ny injeniera mihoatra ny 10 taona amin'ny serivisy fanodinana elektronika (EMS) hanomezana fanampiana ho an'ny mpanjifa bebe kokoa. Tapa-kevitra ny ho tonga mpitarika amin'ny serivisy fifandraisan-davitra elektronika manokana izahay.